Talooyin ku saabsan iibsiga meeldhexaadka ah hawada evaporative:
1, hubi muuqaalka:
dheeraad ah oo siman oo qurux badan Muuqashada yahay, ee caaryada sax sare sheyga loo isticmaalo.
2, Hubi socodka geedi socodka:
Marka aad wax iibsiga alaabta, waa in aad hubiso in ay isu geeyo meelaha, boolal ah, ku riix-badhamada iyo waxyaalo kale oo ay si fiican u rakiban oo ku xiran xidh dhigi.
3, hubi qaybaha ah:
set oo dhan waa la soo ururay oo ay meelo kala duwan iyo qaybaha. Tayada qaybaha kuwa si toos ah saameyn ku yeelan karaan nolosha adeeg meeldhexaadka ah iyo saamaynta qaboojinta. Sidaa darteed, hubi qayb weyn waa talaabada ugu muhiimsan. Component ugu weyn ee meeldhexaadka ah hawada Evaporative ka mid ah: sanduuqa ugu weyn ee gacanta, bamka biyaha, daadi waalka, motor, kabuufi.
Codsiga coolers hawada evaporative
1, meesha ciyey ama degaanka oo u baahan in si degdeg ah qaboojinta ee waqtiga gaaban ah
, jikada, jimicsiga, warshad, kaniisadda, suuqa, hoolka bandhig, qolka shirka tusaale ahaan dugsiga.
2, goobaha wax soo saarka The qalabka heerkulka sare kululaynta
tusaale isweydaarsiga duray Mounding, electroplating, metallurgy, daabacaadda, Glass, machining, cuntooyinka processing iyo reerkii warshadaha korontada
3, Bedka oo ur leh, boodhka ka buuxsamay, nijaas ah hawada
tusaale ahaan jikada Hotel, hoolka isbitaalka, warshadaha caag ah, warshadaha kiimikada, warshadaha maqaar, warshadaha caag, daabacaadda iyo dyeing warshadaha, warshadaha dharka, beer iwm
4, qaybo badan oo u furan
tusaale Mall Shopping, supermarket, dheeldheel, xarun madadaalo, qolka sugitaanka iwm
5, Greenhouse iyo beeraha saldhig cilmi
1, meeldhexaadka ah hawada Evaporative waa u isticmaalaan hawo, qaboojinta, humidification, loo hagaajiyo tayada hawada. Waayo, isticmaalka kale, pls tasho injineerada JH ama iibiya ka hor.
2, Isticmaalka meeldhexaadka ah hawada hoos xaaladaha soo socda ay kordhin kartaa nolosha:
a) heerkulka qalalan guluubka-: 20 ℃ -50 ℃
b) qoyaan qaraabada: ≤85%
c) Cadaadis: 86Kpa-106Kpa
d) Waa in aad hubisaa in biyo nadiif ah loo isticmaalo , iyo heerkulka waa in ay ka yar tahay 45 ℃, cadaadis siin ku saabsan 0.15-1Mpa waa;
e) danab sahayda ma la aad iyo aad karaa ± 15% heerka danab ku
f) No meesha gaaska xoqe
3, qolof The dibadda ah iyo xirmo ee meeldhexaadka ah aan si buuxda u sameeyey by qalabka retardant olol. U hubso in aad ka hortagi meel kasta oo dab ah.
4, In case of dhaawac ka soo daadanayaan, fadlan hubi in tubada iyo furaha tubada ku xiran si sax ah ku xiran ka hor inta la isticmaalayo meeldhexaadka ah hawada ka dhigi.
5, Si looga fogaado Fasaxidda qaboojiyey hawada soo galay meel ku lifaaqan, waa qasab inuu jiro tiro dhammayn filan meelo codsiga, haddii aan, aad furi karin daaqadda ama rakibi mashiinka kale anther muusiqada loo sameeyo qaaca dabiiciga ah iyo Mashiin isku daro.
6, Marka meeldhexaadka ah ee u baahan in la dayactiro, waxaa lagama maarmaan ah in lagu yareeyo korontada iyo saaray calaamad digniin ku yidhi "dayactirka iyo isticmaalka maya".
7, Markay safaro set meeldhexaadka ah, wac adeegga caawimaad, iyo ma beddeli biiro ilaalinta on adiga kuu gaar ah.
8, Fadlan ha joogto ah ugu noqda iyo off coolers ah
9, Sida heerkulka iyo huurka meesha joogta, pls u isticmaali hoos guide ee ku takhasusay heerka .Oo qaboojinta waa dhigmayn in ay qoyaan hawada.
1, suufka qaboojinta nadiifi
suufka ka meeldhexaadka ah ka saar, oo markaas dabadeedna daahir by biyaha tuubada
2, saar urta
The xaaladaha soo socda waxay keeni kartaa qaar ka mid ah urka in dhowr daqiiqo marka ay bilaabaan in ay qabow:
1) Isticmaal qabow roobka ka dib markii
2) Haddii aadan nadiifinta haanta ka dib markii la isticmaalayo, hawada la qaboojiyey laga yaabaa in qaar ka mid ah waxay leeyihiin uriso marka xigta marka aad u isticmaasho. (Hoos u Xir shaqo nadiif ah ayaa lagu demiyo)
3) Ha u nadiifiso meeldhexaadka ah ee ku saabsan waqtiga la isticmaalo waqti dheer ka dib. (Auto shaqo nadiif ah ayaa lagu demiyo)
4) Xaaladda kale.
Guud ahaan waxa la soo jeedinayaa in ay soo jeedin on function xiritaanka nadiif ah si looga hortago in urta.
Filo nadiifiso pads qaboojinta on jeer, waxa kale oo aad ku dari kartaa chlorine jeermiska dioxide si haanta biyaha.
3, Sida loo dayactirka qabow marka aad u isticmaalin in muddo ah ha?
Marka wakhtiga qabowga ama aadan isticmaali coolers in muddo ah, fadlan soo socda:
First, xiro waalka biyaha iyo ka saari suufka qaboojinta u leedahay in lagu nadiifiyo dhamaystiran sida kor ku qoran, waqti isku mid ah, mid madhan laga soo taangiga ah iyo waxa daahirka waxaa. Haddii oggolaanshaha, waxaa dhaanta inay leeyihiin goosashadii ah. Ka dib nadiifinta, rakibi suufka qaboojinta iyo ka dhigi meeldhexaadka ah ee ka shaqeeya 5 ilaa 8 daqiiqo si ay u qalalaan suufka, iyo ugu dambaysta korontada hoos u xidhay. Waxaa wanaagsan in Dhuunta cover ilaaliya noqon doontaa in ciidda ay joojiyaan ka baxsan.
4, ka hor inta hawlgalka Hubi: Ma sabayn waalka kubada si fiican u shaqeeyay? Ma khadadka ay gacanta si sax ah u go'an? Oil dhalista ah haddii uu yahay nooca culus. Hubi pads qaboojinta hawlgalka ka dib markii in muddo ah. Hubi hawlaha kale ee caadiga ah.
5, meeldhexaadka ah hawada Evaporative waa nooc ka mid ah qalabka tamarta lagu badbaadinayo oo waxa keliya oo uu u baahan yahay dayactir qaar ka mid ah. Laakiin sida mishiinka la geliyo ka baxsan, in ay leeyihiin saamayn qaboojinta si fiican, oo ay kuu wanaagsan inaad samayn nadiifinta qaar ka mid muddo dheer la isticmaalayo ka dib.
code Error calaamad qalad Solutions
E1 sahayda ay xoog u qabow si ay hawada ka sarreeya-hadda Fadlan ku jebi xoogga, iyo hubiso korontada ku
E2 sahayda The danab si qabow hawada waa ka badan-danab Fadlan ku jebi xoogga, iyo hubiso korontada ku
E3 sahayda The danab si qabow hawada waa danab hoos- Fadlan ku jebi xoogga, iyo hubiso korontada ku
E4 motor waa kululaado Fadlan ku jebi xoogga, iyo hubiso korontada ku
hubiso pads qaboojinta
dhigaa albaabka u furay inuu hawo ku filan
E8 ilaaliyaal derbiga ma wada aqbali karaan signal ka meeldhexaadka ah hawada Mushaharka in xiriir wanaagsan on interface isgaarsiinta dareenka
E9 tallaabo biyaha aan la dhammeeyey kartaa 15mins gudahood Hubi waalka gacanka
Dhibaatooyinka Common & Remedies jeediyey
Dhibaatada: Qayb ka mid ah pads qaboojinta waxaa qoyan ma
(1) qaybiyaha biyaha laga xannibo, fadlan ku nadiifi.
(2) Haanta biyaha waa slant, fadlan la qabsato heerka.
(3) biyo Low.
Dhibaatada: shubmo socon, laakiinse biyuhu ma wareegtaa, ama pads biyo ka maqan.
(2) strainer saar hor istaagay
Dhibaato: The icon qaboojinta biligleynaya on xakamaysada
(1) Digniin biyo yar yahay, hubi ku furid furaha tubada ama il biyo biyo stop sahayda.
(2) Haddii ay weli biligleynaya markii biyaha la filan, hubi baaritaan heerka biyaha.
(3) strainer saar hor istaagay
Dhibaatada: baxsiga Water
(1) Baxsiga ka biibiile sahayda biyaha: The dabacsan-tuubada waa dadka da'da ah ama la jejebiyey oo aada meelaha biyaha ka. Fadlan beddelo cusub dabacsan-tuubada.
(2) Baxsiga ka tubada: heerka biyaha waa mid aad u sareeya. Fadlan qabsato furaha tubada ee.
(3) Baxsiga dhankeeda guddi: pads qaboojinta ayaa xiran, fadlan ku nadiifi.
Dhibaatada: xakamaysada ah ma muujiyaan karaa
(1) Hubi xiriir korontada. Hubi in qalabka ilaaliya korontada ayaa ka shaqaynaysa.
(2) Fadlan hubi silig dhulka si sax ah ugu xiran. Hubi in khadadka wajiga ku xiran yihiin midig. Hubi haddii fiyuuska jebiyey.
(3) hubi line signal xiran xidh ah.
Dhibaatada: 3PH qabow ku guuldareysto inuu ka shaqeeyo, motor keenay ee halhays ah.
(1) Power maqan wajiga, waxa loo baahan yahay si aad u hubiso korontada ah.
(2) Hubi motor iyo guddiga PCB korontada waa xiriir saboolka ah ama aan.
Haddii sababta ay suurtagal tahay waa ay adag tahay in laga helo, aad u fahmi karaa by bedelo habka, habkan la barbardhigo, habka cameral ama habab kale. Haddii kale, waxa kale oo aad ka codsan kartaa distributors maxaliga ah ama iibiya caawimaad.